"Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao." Deoteronomia 30:19
"Hoy Jesosy taminy: Raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? fa manaraha Ahy hianao." Jaona 21:22
Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo anie ho aminareo mandrakariva.
Izany indray ry havana ny tenin'Andriamanitra tonga amiko sy aminao androany. Tsy tongatonga ho azy izao tenin'Andriamanitra izao; mbola manana hambara amintsika ny Tompo. Eto ny Tompo dia manome safidy malalaka ny tsirairay avy, manoloana izao fandalovana eto amin'ity fiainana ity izao. Satria isika zanak'olombelona dia tsarovy fa mandalo sy mpivahiny ihany isika no eto; 70 na 80 taona ihany isika araka ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Salamo 90:10. Koa ankehitriny ny Tompo manome ny safidy. "efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ... koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao" io no tenin'ny Tompo amintsika ry havana, koa manoloana izany inona no ataoko, inona no ataonao? Ny zavatra tian'ny tenin'Andriamanitra ambara eto ny fiainana ara-panahy, ny fahafatesana dia ny fiainana any amin'ny "Helo na ny Afobe" fa ny "Fianana" kosa dia ilay "Fianana mandrakizay" izay efa nampanantenain'i Jesosy Kristy raha niakatra nankany an-danitra Izy, "Andeha Aho, hanamboatra fitoerana hoanareo". Koa manoloana izany dia afaka misafidy malalaka ny olona iray. Andriamanitra dia tsy manery antsika hoe tsy maintsy miaraka Amiko ianao fa rahatsy izany dia hovonoiko, na miaro fampihorohoroana. Tsia tsy izany ny Tompo, na Jesosy aza tamin'Izy tety ambonin'ny tany dia nanome malalaka ny olona, nanaja ny safidin'ny tsirairay Izy. Nefa aoka ho fantatsika rehetra fa ny làlana makany amin'ny fahaverezana dia malalaka sy migodana, ary eo no mahatonga ny olona hisafidy izany satria tsy misy ny faneriterena, tsy misy fijaliana fa dia misonenika, sy tsy misy sakatsakana. Fa ny fiafaran'izany làlana izany anefa dia hantsana sy lavaka mangitsokitsoka, izay mitondra any amin'ny fahoriana tsy hita pesipesenina.Ary rehefa tonga eo amin'ny vavahady ny fitsarana farany ianao dia hoy Jesosy hoe: "Tsy fantatro ianao na avy aiza na avy aiza"
Fa ilay fiainana iray kosa izay hety sy tery dia misy ny hazo fijaliana izay entina mandrakariva, Tery sy hety ny làlana mankany, hany ka vitsy no mendeha amin'izany làlana izany. Ao ireo mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ny amin'ny fivavahana; nefa tsarovy ry havana fa raha manao izany isika dia mitovy amin'ireo mandeha amin'ny làlana migodana ihany. Fa aoka isika hirehitra mandrakariva, tsy hitsilopilopy, na ho matimaty izany. Mila mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva isika. Nefa mila mibebaka noho ireo fahotana izay natao ihany koa satria io no sakana tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra, sy tsy ahafahany mihaino antsika; na mamaly ny vavaka ataontsika. satria io fahontantsika io no hantsana izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika dia mila manome voninahitra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, manaraka izany dia mifona sy mibebaka amin'izay fahotana rehetra ka tsapanao fa tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io no tena tokony hotsindrina tsara, tsy tokony ho maimaika isika ny hangataka na hanao izay hahasoa ny tenantsika, fa tena ibebaho, ifony italahoy Aminy mihitsy, raha mety aza dia mandohalika isika. Izany no atao raha tiantsika ny hahazo ny Fiainana izay ampanantenain'Andriamanitra, sy izay efa napetrany eo anoloantsika. Aza mijery olona na ny manodidina anao ianao, fa ny hafa dia tsy hamonjy anao amin'ny andro farany. Rahefa miala amin'izao fiainana izao mantsy isika ry havana ny manodidina anao na ny akaiky anao, tsy hiaraka aminao mandrakariva ireo rehefa manoloana ny fitsaran'Andriamanitra. Fa isika irery ihany no mitsangana manoloana izany fitsarana izany. Ka na ianao any amin'ny Fiainana na any amin'y fahaverezana. araka ny hita ao amin'ny (Daniela 12:2, Matio 19:16, Eksodosy 20:12-16, Levitikosy 19:18, Matio 19:29, Matio 25:46, Marka 10:17, Marka 10:30, Lioka 10:25-28, Jaona 3:15-16, Jaona 3:36, Jaona 4:36, Jaona 5:24, Jaona 5:39). Manaraka izany dia mila misakafo tenin'Andriamanitra mandrakariva isika, fa tsy tokony ho variana ny amin'izao fiainana izao ihany, ary tokony hanankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra; apetraka ao Aminy izay rehetra ataontsika mba hanantsika ny Fiainana ary iainantsika izany dieny mbola ety ant-tany isika Jaona 6:27, izany akory tsy midika hoe tsy mahazo mitady vola isika na mihary harena; fa tokony ho lanjalanjaina tsara ny fiainantsika indrindra fa isika Kristianina, io harena sy vola io mantsy no fitaovana iray entin'ny devoly animbana ny zanak'Andriamanitra. Isika zanak'Andriamanitra dia mahay mionona, mahay mankasitraka, mahay misaotra an'Andriamanitra amin'izay anana. Koa aoka isika hibanjina sy hanaraka an'i Jesosy mandrakariva araka ny teniny ao amin'ny Jaona 21:22 hoe: "...fa manaraha Ahy hianao". Eto Jesosy dia miteny fa mila manaraka Azy isika raha te hanana ny fiainana. Nefa indraindray dia tsy manaraka izany isika, fa isika indray no miady ho lohany, fa Jesosy indray no asaintsika mandeha ao afara. Lasa sarety mitarika omby, hany ka tsy mahomby amin'ny zavatra izay ataontsika isika, ary tsy mahatratra ny tanjona izay tratrarina; nefa misy làlana tian'Andriamanitra itondrana antsika, mety hisy fanefena antsika izany, nefa tsy manaraka izany isika. Koa meteza mandrakariva, ho eo alohantsika Jesosy amin'izay rehetra atao, na inona na inona izany. Apetrao aminy mandrakariva ny fiainana, mba ahafahantsika mandeha amin'ny làlan'ny fahamarinana, ary ahazoantsika ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay izany. Satria Jesosy no mpanalàlana antsika izy no vavahady ahafantsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa rehefa avy isika amin'ny andro izay hihaonantsika aminy dia hanamabara sy hilaza amintsika izy hoe: "Ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao.".
Ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irety ihany, ny fiadanany kosa hoaminareo mandrakariva.
Misaotra anao izahay ry Tompo Rainay tsara indrindra, ilay Tompon'ny tompo; Mpanjakan'ny mpanjaka. Andriamanitra be voninahitra, tsara sady mpanao ny tsara. Ny lanitra no fitoeran'ny voninahitra ary ny tany no fitoeran-tondotrao. Manaja anao aho, manondrika ny lohako, ny tenako manotolo manoloana ny Voninahitrao Lehibe. Ny anjelinao midera sy manome voninahitra anao isan'ora, isa-minitra, isa-tsegondra; fa ny ahy Tompo ô, dia tsotsotra izao ihany eto ampanondrehana ny loha, ny foko manontolo; manaja sy manome voninahitra anao. Misaotra Tompo ny amin'ny teny izay omenao ahy androany, mampahatsiahy indray fa mbola misy fiainana ankoatra izao fiainana izao, dia ilay fianana mandrakizay miaraka aminao. Mahatsapa aho ankehitriny, fa tsy nahatanteraka izany; koa dia mangataka famelana aminao, ny amin'ny fahotana izay vitako, sy tsy nety teo anatrehanao. Mifona aho ny amin'izay nolazain'ny vavako, nandehanan'ny tongotro, izay noraisin'ny tanako, izay neritreretiko sy nosaintsainiko; ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, entiko eto anatrehanao izany Jesosy. Meteza ianao Jesosy handray ny fifonako, mamindra fo amiko, araka ny tenin'i Baritolomeo jamba izay nangataka ny fahasitranana, "Ry Jesosy zanak'i Davida ô amindra fo amiko", amin'ny fo no anaovako izany Jesosy; eto an-tongotrao no andohaliako, eto ampototry ny Hazo Fijalianao no anaovako izany, iankohofako ankehitriny angatahako famelana aminao. Diovy ny any anatin'ny foko rehetra any, satria "izay be ao am-po no mivoaka amin'ny vava." Forao ny foko, ovay ho fo vaovao, tahaka ny Anao, ka hahaizako mitempo ho Anao sy ho tia Anao, ho tia ny hafa ihany koa. Ka ho tanteraka amiko ny teninao hoe:"Tiava ny namanao tahaka ny tenenao", "Tiava ny fahavalonao". Mba hahay hamela heloka ihany koa Jesosy. Tsy mendrika na dia ny hamaha ny kofehin'ny kapanao akory aza aho Jesosy, raiso Tompo ô ny fifonako. Misaotra Jesosy fa tia ahy ianao, fa miteny amiko ianao hoe:"Avia hifandahatra isika, na mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia hofotsiako tahaka ny oram-panala, na mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia hofotsiako tahaka ny volon'ondry fotsy". Koa misaotra Jesosy fa Andriamanitra be famindram-po tokoa Ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no naovako izany vavak izany, ary ho anao ny saotra ny dera, ny voninahitra mandrakizay. Amen